Waxyaabaha adag ee la hakiyay (Xoog saarista) Soo-saareyaasha Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shirkadda Shiinaha ee Hakadka ku Jirta (Ku-Fiirsashada Dareeraha) Warshad Soo-gudbiyaha
Qiyaasta adag ee tooska ah ee mitirka T4075
Mabda'a dareeraha dareeraha dhoobada wuxuu ku saleysan yahay iskudhafka nuugista infrared iyo habka iftiinka firidhsan. Habka 'ISO7027' waxaa loo isticmaali karaa in si isdaba-joog ah oo sax ah loo go'aamiyo isku-ururinta dhoobada.
Marka loo eego ISO7027 tiknoolajiyada laydhka laba-firdhiska infrared saamayn ku yeelan mayso si loo go'aamiyo qiimaha foojignaanta qulqulka. Waxqabadka is-nadiifinta waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo deegaanka isticmaalka. Xog xasilloon, waxqabad la isku halleyn karo; ku-shaqeynta is-baaritaanka si loo hubiyo xogta saxda ah; rakibidda fudud iyo hagaajinta.
Qiyaasta adag ee tooska ah ee mitirka T6075
Mabda'a dareeraha fiirsashada dhoobada wuxuu ku saleysan yahay
nuugista infrared isku dhafan iyo habka iftiinka firidhsan. Habka 'ISO7027' waxaa loo isticmaali karaa in si isdaba-joog ah oo sax ah loo go'aamiyo isku-ururinta dhoobada.
Qalabka adag ee Khadka tooska ah looga joojiyay T6575
Qalabka adag ee la joojiyay ee Dijital ah (Isku-buufinta qulqulka) Sensor
Mabda'a dareeraha dareeraha dhoobada wuxuu ku saleysan yahay iskudhafka nuugista infrared iyo habka iftiinka firidhsan. Habka 'ISO7027' waxaa loo isticmaali karaa in si isdaba-joog ah oo sax ah loo go'aamiyo isku-ururinta dhoobada. Marka loo eego ISO7027 tiknoolajiyada laydhka laba-firdhiska infrared saamayn ku yeelan mayso si loo go'aamiyo qiimaha foojignaanta qulqulka. Waxqabadka is-nadiifinta waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo deegaanka isticmaalka. Xog xasilloon, waxqabad la isku halleyn karo; ku-shaqeynta is-baaritaanka si loo hubiyo xogta saxda ah; rakibidda fudud iyo hagaajinta.
Qalabka adag ee la joojiyay ee Dijitaalka ah (Isku-buufinta qulqulka) Sensor leh Nadiifinta otomaatiga ah
Mabda'a adkaha la joojiyay (fiirsashada qulqulka) wuxuu ku saleysan yahay isku dhafka infrared isku dhafka ah iyo habka iftiinka firidhsan. Habka 'ISO7027' waxaa loo isticmaali karaa in si isdaba-joog ah oo sax ah loo go'aamiyo isku-ururinta dhoobada. Marka loo eego ISO7027 tiknoolajiyada laydhka laba-firdhiska infrared saamayn ku yeelan mayso si loo go'aamiyo qiimaha foojignaanta qulqulka. Waxqabadka is-nadiifinta waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo deegaanka isticmaalka. Xog xasilloon, waxqabad la isku halleyn karo; ku-shaqeynta is-baaritaanka si loo hubiyo xogta saxda ah; rakibidda fudud iyo hagaajinta.
Feeraha Dareeraha Fududeeyaha, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Sensor-ka Electromagnetic, Waxqabadka TDS Sensor, Chlorophyll Sensor, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka,